मन्त्री ज्यू, ‘महिलाको शत्रु महिला नै हो’ भन्नेहरुलाई गलत सावित गरीदिनुस् न ! « Naya Bato
मन्त्री ज्यू, ‘महिलाको शत्रु महिला नै हो’ भन्नेहरुलाई गलत सावित गरीदिनुस् न !
माननीय मन्त्री विना मगरज्यू,
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं, नेपाल
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको मन्त्री पद सम्हाल्ने अवसर पाउनु भएकोमा सर्वप्रथम त हार्दिक हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
तपाईं खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री बन्नु भएकोमा सम्पूर्ण नेपाली महिलाहरुको शिर ठाडो भएको आभास भएको छ । पुरानो राज्य सत्तालाई परिवर्तन गरि नयाँ व्यबस्था ल्याउन भनी बाल्यकालमानै सशस्त्र द्वन्द्वको आन्दोलनमा होमिनु भयो ।
बालकलाकारदेखि विद्यार्थी संगठन तथा महिला संगठन हुँदै पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा समेत आबद्ध हुँदै जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभयो । त्यति मात्र होइन युद्धकालमा २७ महिनासम्म बेपत्ता बनाएर सेनाको हिरासतमा राखेर दिइएको चरम यातना र क्रुरतालाई समेत सहन गर्नुभयो ।
त्यतिखेर पाएको यातनाले सायद तपाइको शरीर दुखिरहेको होला । त्यतिबेला पाएको मानसिक पीडालाई सम्झँदा कहाली लाग्छ होला। आफ्नै काखबाट खोसेर साथीहरुलाई मारेको दृश्य सम्झँदा भक्कानो छुट्छ होलाा त्यहाँबाट बाँचेर निस्कन्छु जस्तो लागेको थिएन होला तपाईंलाई यस्तो अवस्थामा पनि विचलित हुनुभएन । तपाईंको आँट, साहस र धैर्यतालाई सम्मान गर्नुपर्छ । त्यति मात्र होइन विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण पनि गर्नु भयो । यस अर्थमा पनि तपाईं साहसी महिला हो ।
त्यति मात्र होइन जब चुनाव प्रचार प्रसारको अभियानमा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर त झन तपाईं माथी अकल्पनीय बज्रपात भयो । तपाईंका पति प्रकाश दाहालको असामयिक निधन हुन पुग्यो । पति गुमाउनु पर्दाको त्यो पीडा कति दर्दनाक थियो, त्यो कसैले मापन गर्न सक्दैन ।
पति वियोगको ६ र ७ दिनमै चुनाव प्रचार प्रसारमा खट्नु पर्यो । सामान्य मानिस नै शोकमा डुबेको बेला सानो नानी च्यापेर चुनावी अभियानमा खट्नु अनि उमेदवार भएर भाषण गर्नु चानचुने कुरा थिएन । फेरी विभिन्न सामाजिक सञ्जाल तथा संचार माध्यमहरुमा मृत श्रीमानका खराब चरित्रका कुराहरूलाई उच्च प्राथमिकताकासाथ छरपस्ट पारेर छरिदिंदा तपाईंको पीडामा नुन, खुर्सानी र चुक मिसिन पुग्यो ।
त्यसबेलाको तपाईंको पीडा अनुमान लगाउन कसले सक्ला र ? तैपनि आँसु छल्किएका आँखा आकाशतिर हेरेर झिमझिम गर्दै आँसुलाई आँखाभित्रै पठाउन कत्ति कठिन भयो होला ! तैपनि साहस जुटाएर कुशलतापूर्वक अगाडि बढ्नुभयो । जो कोहीले कहाँ गर्न सक्छ र ! यस अर्थमा पनि तपाईंको साहस र आँट अनि धैर्यतालाई सम्मान गर्दछु ।
देश र जनताको मुक्ति खातिर युद्धमा होमिदाँदेखि आजसम्म आइपुग्दा धेरै कुरा गुमाउनु भयो होला त्यसको बदलामा एउटा मन्त्री पद पाउनु भएको छ । अब तपाईले यो मन्त्री पदमा रहेका बेला साँच्चै राम्रा र उदाहरणीय काम गरेर देखाउनु पर्ने छ । बहादुर मन्त्री बनेर छाप छोड्नुपर्ने छ। सबैलाई समान अधिकार, समान अवसर र न्याय दिनुहुनेछ । कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्नुहुने छैन ।
कसैमाथी अन्याय पर्न दिनुहुने छैन भन्ने विश्वास लागेको छ र गर्दछु पनि । सबै मन्त्री भन्दा राम्रो र उदाहरणीय काम तपाईँले गर्नुपर्ने छ। सबैभन्दा कान्छो उमेरको मन्त्री सायद तपाईं नै पर्नु हुन्छ होला । त्यसैले सानो उमेरको मन्त्री त्यसमा पनि महिला। यस अर्थमा पनि तपाईंले सम्हालेको मन्त्रालयबाट भएका कामको वाह ! वाह ! हुनुपर्छ भन्ने लागेको छ ।
मन्त्री ज्यू, अहिले तपाईं जुन कुर्सीमा बस्नुभएको छ, त्यो कुर्सीमा पुर्याउन धेरैले रगत र पसिना बगाए । धेरैले ज्यानको बलिदानी गरे। धेरैको अथक प्रयास, योगदान र त्याग पनि जोडिएको छ तपाईंको त्यो पदमा। कसैले प्रत्यक्ष गरे होलान् कसैले अप्रत्यक्ष, कसैले बोलेर गरे होलान् कसैले चुप लागि दिएर । आखिर ज–जसले जसरी गरेपनि तपाईंलाई सबैले गुण लगाएकै छन् । अब उनीहरुको यो गुणको बदलामा उनीहरुलाई तपाईंले न्याय दिनुपर्ने छ ।
तपाईं जस्तो जीवन बुझेको मान्छेले पछि हट्नु हुनेछैन भन्ने कुरामा पूर्ण विश्वस्त छु। हुन त चुनावमा टिकट पाएदेखि मन्त्री बनिन्जेलसम्म तपाईंले पाएको अवसरलाई दाहाल परिवारसँग जोडेर हेर्नेहरुको भिड पनि कम छैन। त्यसरी हेर्नेहरुले दाहाल परिवारसँग नाता जोडेर भन्दापनि तपाईंको योगदान र वलिदानीपूर्ण संघर्ष र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धी र अवसर हो भनेर सबैले बझिदिए हुन्थ्यो भन्ने मेरो ठम्याइ छ ।
त्यसैले अब यस्ता सबैखाले विचारहरूलाई चिरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । तपाईंको काँधमा अझै धेरै जिम्मेवारी थपिएका छन् । ति जिम्मेवारीहरू कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने दायित्व तपाईंको हो ।
हिजो तपाईंसँगै युद्धमा होमिएका योद्धाहरू, तपाईंको युद्धमा जोडिएर न्यायको भिख मागिरहेका परिवार, महिला, युवा, एकल महिला तथा स्वच्छ खानेपानीको अभावमा तड्पिएका जनता मात्र होइन तपाईं र तपाईंको परिवारसँग जोडिएका नातेदारहरु तपाईंले दिने न्यायको पर्खाईमा छन् ।
महिलाको विकास अनि राज्यमा पहुँचको विषय अझै पनि चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको छ। यस्तो बेलामा तपाईं मन्त्री हुनु भएको छ।
तपाईंले मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम थुप्रै होलान् । जसमध्ये जनताले सहज र सरल तरिकाले स्वच्छ पानी पिउन पाउने व्यवस्था गर्नु, सरसफाइको अवस्थामा सुधार ल्याउनु, खानेपानी तथा सरसफाइमा प्रभावकारी ढंगबाट सुधार ल्याइ स्वच्छ खानेपानीका अभावमा कसैले मर्नु नपर्ने गरि चुस्त दुरुस्त तरिकाले काम गर्नुपर्ने एकातिरको जिम्मेवारी छँदैछ। यस बाहेकको काम पनि तपाईंको जिम्मेवारी भित्र पर्छ। त्यसैले तपाईंले व्यक्तिगतरुपमा सहयोग नगरी नहुने केही कामहरु प्रतिनिधिमूलक तरिकाले यहाँ राख्न चाहन्छु ।
१. पाँचथर हिलिहाङ गाउँपालिका–७, की अनुपमा राई जो १६ बर्ष अगाडि ‘मरे एक ज्यान जिते सिङ्गो देश’ भनेर युद्धमा होमिएकी थिइन् । २०५९ मा भोजपुरको चैनपुर, आक्रमणमा उनलाई गोली लाग्यो । त्यसपछि उनी सेनाको कब्जामा परिन् । कहालीलाग्दा दिनहरु बिताएर २१ दिनमा कमान्डरको सम्पर्कमा पुग्दा उनी आक्रमणमा परेर मरिन् भनेर शहीद घोषणा गरि सकिएको थियो । त्यही युद्धमा लागेको गोलीको छर्रा आज पनि अनुपमाको शरीरमा छँदैछ । निकाल्ने पैसा छैन पार्टीले वास्ता गरेन ।
अनुपमा र उनीजस्तै शरीरमा गोलीको छर्रा बोकेर उपचारको खोजीमा भौतारिनेहरुले युद्ध लडिदिएकै कारण पार्टी पटक पटक सत्तामा पुग्यो । नेताका जीवनस्तर सुधारिए। आलिसान महल ठडिए । तर योद्धाको शरीरमा रहेको गोलीको छर्रा अझै निकालिएको छैन। अब यिनीहरुलाई न्याय दिने काम तपाईंको हुनेछ । किनकि युद्धको घाउले तपाईंलाई पनि पोलेको छ। त्यसैले तपाईंको मन्त्री पदमा उनीहरुको पनि अंश लाग्छ ।
२. तपाईंहरुको युद्धले मारेका छोराको हत्यारालाई कारबाहीको माग राख्दै बुबा नन्दलाल र आमा गंगामाया अधिकारी अनसन बसे। लामो समय अनसनमा बसेकै बेला नन्दलालले देह त्याग गरे । उनको मृत शरीरले त्रिवी शिक्षण अस्पतालको बाकसबाट चिहाइ रहेको छ कि कतै छोराको हत्यारालाई कारबाही गरेको देख्न पाइन्छ कि भनेर ।
गंगामाया पनि अति नाजुक स्थितिमा नै सोही माग राख्दै अनसनमै छन् । छोराको हत्यारालाई कारबाही गरेको हेर्न खोज्दा खोज्दै उनको प्राण पखेरु कतिबेर उड्ने हो भन्न सक्ने स्थिति छैन ।
उनको बृद्धावस्थाको सहारा त तपाईंको युद्धले खोस्यो खोस्यो, तपाईंको पार्टीले व्यथा नबुझिदिँदा उनको जीवन पनि उजाडियो । यसको दोष कसले लिने ? ती गंगामाया अधिकारीलाई न्याय दिनुपर्ने छ तपाईंले । पति वियोगको पीडा तपाईंले भोग्नु भएको छ । अनि पुत्र वियोगको पीडा तपाईंका सासु ससुराले । तपाईं पनि एक छोराकी आमा हुनुहुन्छ। त्यसैले पनि यि मर्मलाई बुझेर तपाईंले अधिकारी परिवारलाई न्याय दिनुपर्ने छ ।
३.तपाईं युवा महिला अनि एकल पनि हुनुहुन्छ। अब युवा अवस्थामा एकल हुने महिलाका लागि कस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर उनीहरुलाई राहत दिनुहुन्छ त्यो पनि तपाईंको जिम्मेवारीभित्र पर्छ भन्ने लाग्छ मलाई ।
४. तपाईं २७ महिनासम्म वेपत्ता हुँदा तपाईंको परिवार कति तड्पिएका थिए अनुमान छ तपाईंलाई ? अब २० वर्षदेखि तपाईंको पार्टीले बेपत्ता पारिएका नागरिकका परिवार कति तड्पिएका होलान् अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ ? त्यसैले बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्ने जिम्मा पनि तपाईंले लिनुपर्छ । किनकि तपाईंको पार्टी अध्यक्ष तपाईंको ससुरा बुबा हुनुभएकाले तपाईंलाई कुरा राख्न सहज हुन्छ ।
५. अर्को महत्वपूर्ण कुरा जसको पतिसँग तपाईंले विवाह गरेपछि उनी घर न घाटको जीवन बिताउन बाध्य भएकी छन्,अब उनको बारेमा पनि काम गरेर देखाउने बेला आएको छ। अब उनै सृजना त्रिपाठीप्रतिको तपाइको धारणा पनि बाहिर आउनु पर्छ। उनी पनि पार्टीमा सक्रिय कार्यकर्ता अनि विवाहित बुहारी, फेरी घरमा बस्ने अधिकार किन छैन उनलाई ? त्यसैले तपाईंको मन्त्री पदको महत्वपूर्ण भागिदार सृजना पनि हुन् ।
तपाईंहरु दुवैका पति प्रकाश दाहालको असामयिक निधनले दुवैजना विक्षिप्त बन्नुभयो। त्यही अवस्थामा बिभिन्न ठाउँमा राखिएको श्रद्धाञ्जली सभामा तपाईं सहभागी हुन पाउनु भयो तर उनी पाइनन् । तैपनि उनले सम्यमता अपनाइरहिन् ।
त्यति हुँदा हुँदै पनि ऐतिहासिक चुनावको महत्वलाई बुझेर प्रचार प्रसारको लागि आफ्नो क्षेत्रमा खट्न ससुराको निर्देशन मान्दै पोखरा गएकी थिइन्। उनले पनि चुनावको बेला घरायसी कुरालाई नकोट्याउन साथीहरुलाई अनुरोध गरिन् । यसरी धैर्यता गरेकी सृजना र उनको छोराप्रति तपाईंले न्याय गर्नुपर्छ।
सरसफाइ मन्त्रीले सबैभन्दा पहिला आफ्नो घरको सफाई गर्नुपर्छ भन्ने धेरैको माग छ ।
पटक पटक विवाह दर्ता गरिदिन र छोराको जन्म दर्ता बनाइ दिन गरेको मागलाई दाहाल परिवारबाट वेवास्ता भयो । यतिकैमा प्रकाश बिते । अब सृजनाको नाता प्रमाणित गर्ने र छोराको जन्म दर्ता बनाइदिने अनि अधिकार सहितको सम्मानित जीवन जिउन पाउने वातावरण बनाइदिने जिम्मा तपाईंको हो ।
मन्त्री ज्यू, महिलाको शत्रु महिला नै हुन्छन् भनेर दुनियाँले गीत गाइरहेको बेला अनि यस कुरालाई चिरेर अगाडि बढ्न महिला अधिकारकर्मीहरुलाई चुनौती भइरहेको छ। त्यसैले यहि कामबाट शुरुवात गरिदिनोस् कि
महिलाको शत्रु महिला नै हुन् भन्नेहरुलाई गलत सावित गरिदिनु न !
धेरै दिनदेखि मनमा उकुस मुकुस भएर दौडिरहेका प्रश्नसहितका विचारहरु पत्रमा उल्लेख गर्न पाउँदा मन हलुका भएको छ। आशा छ यस्ता अनगिन्ती जिज्ञासाहरु मेटाउन सक्ने साहस र क्षमता तपाईंसँग छ। तपाईंले चाहनु भयो भने असम्भव भन्ने कुरा केही छैन भन्दै पत्रको बिट मार्न चाहन्छु ।
तिलकुमारी शर्मा, विराटनगर
१.पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)पूर्व प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष, नेकपा माओवादी केन्द्र